Mareykanka oo sheegay inay dib u eegayaan taageerada ciidanka Danab
Sarkaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxday in ciidamada Danab oo ay Maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qaybgaleen colaadii ka dhacday magaalada Guriceel.
Sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ayaa VOA u sheegay in Maraykanku uu ka war hayo wararka sheegaya in ciidamada Danab ay ka qaybgaleen dagaalka Galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tebisay ee sheegaya in taliye Cabdiladiif Fayfle iyo xubno kale oo ka tirsan Danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka.
Sarkaalkaasi waxa uu sheegay in Maraykanku uu tacsi u dirayo qoysaskooda iyo dhammaan dadkii uu saameeyey.
Sarkaalkaasi oo sii hadlayey waxa uu intaasi ku daray in Marayanku ugu baaqayo dhinacyada inay joojiyaan hawlgallada milatari ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro.
Waxa uu intaasi ku daray sarkaalkaasi in dawladda Marayanku ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guulaysto Al-Shabab, sida uu sheegay sarkaalku.
Taas iyadoo laga duulayo, ayuu yiri sarkalakaasi, waxaan dib u eegis ku samaynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqadaysa siyaasadda iyo hadafka Maraykanka.